Vechidiki veMDC neZanu PF Vobatana paMusangano muBulawayo
Vechidiki vemapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vanoti zvakakosha kuti vechidiki vabve zera vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota uye vawanikwewo vachitsvaga zvinzvimbo zvehutungamiri.
Vachitaura pamusangano wekuzeya kuti sarudzo dzegore rinouya dzakakosha sei kune vechidiki, vechidiki vemapato akasiyana-siyana kusanganisira veZanu PF neMDC vakabvumirana kuti vane danho rakakosha mukuvaka nyika uye kuti zvakakosha kuti vechidiki vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota, uyewo kuti vawanikwe vachishuvira kupinda pazvinzvimbo zvakadai sekuve makanzura kana vamiriri veparamende.
Nhengo yeYouth League mudunhu reBulawayo, VaFundisani Dewa, vakati kunyange hazvo zviri pachena kuti vechidiki ndivo vakawanda munyika, musarudzo dzapfuura vechidiki vakawanda havana kuvhota vachitiwo, sarudzo dzegore rinouya dzinogona kungofanana nedzimwe sarudzo dzose kana vechidiki vakasazvipira kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota.
Vachipindura mubvunzo wekuti sei vechidiki veZanu PF vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakwikwidze musarudzo dzegore rinouya izvo zviri pachena kuti vakwegura, VaDewa vakati bato ravo rinoona VaMugabe vari ivo vakakodzera nekuti vachiri kudiwa neveruzhinji.
Mutauriri wevechidiki veMDC-T, VaAlfred Dzirutwe, vakakonzera mutauro pamusangano uyu apo vakati VaMugabe nebato ravo reZanu PF vajaira zvemhirizhonga, vakati vanobva pachigaro chete kana vechidiki vakazvipira kuvabvisa nechisimba.
VaDzirutwe vakati bato ravo reMDC T hariite uye hari kurudzire zvemhirizhonga, asi vakati nekuda kwehutongi hwavanoti ndehwe hudzvinyiri huri kuitwa neZanu PF, vechidiki vanofanirwa kuzvipira kusangana nemhirizhonga mukurwira kodzero dzavo.
Mutauriri webato reZAPU, VaIphithule Maphosa, vakatiwo zvakakosha kuti vechidiki vadewo kupinda muzvinzvimbo zvehutungamiri, vachiti izvi zvinobatsira kuti vakwanise kupedza matabudziko akasiyana-siyana avakatarisana nawo.
Muzvare Natasha Karimakwenda vanove mumwe wevechidiki aivepowo pamusangano uyu, vakati kunyange hazvo zvakakosha kuti vechidiki vapinde muzvigaro zvehutungamiri, vechidiki kunyanya vechikadzi, vanotya kuita izvi nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika inowanzoitika panguva dzesarudzo.
Mumwezve wechidiki aive pamusangano uyu VaMangosuthu Mbele, vakati zvisinei nemapato avanotsigira, vechidiki vanofanirwa kuziva kuti zvakakosha kuti vaise misoro pamwe chete kuti vakwanise kurwisa matambudziko avakatarisana nawo akadai sekushaya mabasa.
VaAdrian Moyo vebato reMDC inotungamirwa naVaWelshman Ncube vakatsinhirawo vachiti vechidiki havafanirwe kungoita gundamusaira vachiteverera zvematongerwo enyika mumapato avo vasingafungisise nezvematambudziko avakatarisana nawo.
Musangano wanezuro wakaitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Café pasi pezvirongwa zvinoitwa nesangano reFriedrich Ebert Stiftung zvekudzidzisa vechidiki zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira zvehutungamiri.